China Belt, chain feeder Ukukhiqiza neFektri | Izinsiza kusebenza zeChengxin Vibration
Isondli sebhande sinesakhiwo esilula nokusebenza okuzinzile, ikakhulukazi ivolumu enkulu yokuphakelwa iyathandwa ngabasebenzisi. Ukuphumelela kwethu okukhulu kwezobuchwepheshe yidivayisi ephula i-arch, engakhulula ngempumelelo ingcindezi esemlonyeni womgqomo futhi ivimbele okokuchitha okusemlonyeni womgqomo. Ibhande lesiketi lohlobo lwesi-6 + 1 lenziwe umunyu ngasikhathi sinye, ngezendlalelo eziyisithupha zensimbi yenayiloni nongqimba olungu-1 lwentambo yocingo lwensimbi elenziwe nge-ultra-fine elingeniswe eJapan. Inokumelana okuqinile okuqinile, ukumelana nokungqubuzana, ukusekelwa komlilo, futhi umphetho wesiketi wangaphandle awulungile kuphela Kungavimbela impuphu ecolekileyo ukuthi iphume futhi umswakama okukulo ungagcwali. Ezinkulungwaneni zamathani zempahla ngehora, zihlangabezana kakhulu nezidingo zokukhiqizwa kwanamuhla, zenzela izinzuzo ezinkulu kwezomnotho kumakhasimende.
Isiphakeli samaketanga sisebenzisa isimiso sokujikeleza kwamaplanethi, imiphongolo yokufaka nokukhiphayo ikulesi eksisi efanayo, futhi inezici ezihlukile zokuxhumana ngqo nensimbi, ngakho-ke inesakhiwo esihlangene, ukuma okuhle nenoveli, ivolumu elincane nesisindo esincane. Umhlangano wamagiya wenziwe ngensimbi ethwele. Inokusebenza okuhle nokumelana nokugqoka okuphezulu. Ukunikela, ibhokisi lamagiya, kude nomzimba we-valve, gwema ithonya lokushisa okuphezulu nothuli. Izembozo zokuphela zangaphambili nangemuva zinokusebenza okuhle kokuvala uphawu, kuvimbela ukuvuza kothuli, futhi kwandise impilo yenkonzo yezingxenye nohlelo lokuthambisa.
Isilinganiso sokuphakelayo t / h
Imodi yokulungiswa kwesilinganiso sokuphakelayo
Ukudluliswa okungenanyathelo okwenziwa ngesandla
I-LDG / 4 / P / B-1
Ijubane eliguqukayo lokushintsha kwesivinini
Uhlobo lobufakazi bokuqhuma
I-LDG / 5 / P / B-1
I-LDG / 5 / F / B-1
Langaphambilini CGS igebe roller roller screen - Chengxin
Olandelayo: I-feeder yediski yokulinganisa ye-CypB